Global Voices teny Malagasy » Kyrgyzstan: Horonantsary Nataon’ny Vondrom-piarahamonin’ny Niova Sy Mpitia Mitovy Fananahana Ho Valintenin’ny Tenin’ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana Mankahala Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2018 15:36 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika Vero
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Efa voajery mihoatra ny in-409 tao anatin'ny 15 ora taorian'ny nivoahany ary izao lasa nasiana feo faharoa sy dikanteny amin'ny Anglisy ilay horonantsary eo amin'ny aterineto, namboarin'ny vondrona Labrys an'ny nanova na mpitia mitovy fananahana ao Kyrgyzstan  ho valin'ny tenin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana mankahala ny mpitia mitovy fananahana izay .
Araky ny tenin'i Adil Nurmakov  tamin'ny 13 Martsa 2008 lasa teo , namoaka horonantsary nanoherany ny lahatsoratra feno fankahalàna ny pelaka navoakan'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana an-gazety ny Labrys, ilay Vondron'ny vehivavy mitia vehivavy, ny ireo sady tia lahy no tia vavy ary ny olona miova fananahana ao Kyrgystan. 
Tamin'ny Febroary 14, nisy hetsika nokarakaraina ho an'ny faha-4 taonan'ny Labrys ary nanasàna ny mpanao gazety, nahafahan'izy ireo niresaka momba ny asa tany aloha, ny làlana izorany ho an'ny hoavy ary ny toetra feno fandeferana an'Andriamanitra manoloana an'ireo mpitia mitovy fananahana, ny tapany farany notenenin'i Rev. Maksim Bratukhin. Ito manaraka ito ny tsonga avy amin'ny fihetsempon'ny filazambaovao sy ny daholobe manoloana ny fivorian'ny mpanao gazety tamin'ny 14 Febroary  teo amin'ny tranonkalan'ny Labrys.
Tamin'ireo mpampita vaovao, vitsy saingy voamarika tsara, izay nandrakotra ny kabarin'i Rev. Maksim Bratukhin momba ny fandeferan'Andriamanitra manoloana an'ireo mpitia mitovy fananahana, no misy ny tranonkala Strana.Kg  sy ny Channel 5 (tsy misy rohy mandeha). Lasa lasibatra tsy fidiny ity fantsona farany ity teny anaty fampitàna an-gazety ratsy sy ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana, izay nampahafantarinay tao anatin'ny lahatsoratra teo aloha.
Nasongadina ito ‘tantara mananfintohina’ ito tao amin'ny tranonkalambaovao kloop.kg  miaraka amin'ny fanadihadiana lalina ny fototrin'ilay resabe teo amin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana sy ny Fiangonana Ortodoksa Apostolika izay Rev. Maksim Bratkuhin no mpisolo tena azy. Tao amin'ilay tafa ho an'ny mpanao gazety sy ilay fampitàna an-gazety, nantsoin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana hoe ‘sodomita’ ireo mpitia mitovy fananahana, ary vondrona miasa ho an'ny fitsinjovana ny zon'ireo ‘sodomita’ kosa ny Labrys – manampy ny isan'ny fanompana natao an'ny Rev. Maksim Bratukhin, miantso azy ho ‘olona vetaveta miafina’.
Ny fampitàna an-gazety fahatelo tamin'ity volana Martsa ity, mitondra ny lohateny hoe ‘Tsy nanohana, tsy manohana ary tsy hanohana velively ny sodomita mihitsy ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana” ary afaka hita amin'ny fanarahana an'ity rohy ity mankany amin'ny tranonkalan'ny Labrys . Ho valin'iny fampitàna an-gazety iny, nanamboaran'ny Labrys lahatsary hiresahany ireo teboka navoitran'ny fiangonana sy hiarovany ny fomba fijeriny ary nilazany ny fanoheran-dry zareo ny fisafidianana ny teny nampiasain'ny fiangonana niantsoana ny vondrona LGBT ho “sodomita “
Avy amin'i Genderstan :
Navoaka tao amin'ny tranonkala Kyrgyz fandefasana lahatsary  ary voajery in-409 tao anatin'ny 15 ora voalohany namoahana azy. Maneho an'i Gulnara Kurmanova avy ao amin'ny Fikambanana AntiAIDS izay mpifanome tànana mahery amin'ireo niova sy mpitia mitovy fananahana aminy, sy ilay mpanao gazety Bektour Iskender , ilay mpisorona Maksim Bratukhin  ary Anna Kirey, lohan'ny ‘Labrys’ Fikambanan'ireo niova sy mpitia mitovy fananahana, ilay lahatsary ao Rosia. Niaraka nitety ny fijerin'ny fivavahana an'ny niova sy mpitia mitovy fananahana ary niresaka momba ny fahafahana manokatra resaka momba ireo olan'ny niova sy mpitia mitovy fananahana izay matetika tsy resahan'ny vondrona hafa.
Efa nampakatra an'ilay lahatsary Rosiana feno  i Labrys, hatramin'ny karazany iray nasiana feo faharoa  sy iray hafa nasiana dikanteny. “Hikarakara fanambarana miresaka momba ny zo maha-olona an'ireo olona niova sy mpitia mitovy fananahana ary avy amin'ireo vondrona hafa mitovy aminy, hiantsoan'izy ireo ny tsy fanavakavahana sy fampidirana azy ireo ho ao anatin'ny fiarahamonina tahaky ny mpikambana tsotra”, araky ny nosoratany tao amin'ny bilaogin-dry zareo. Manaraka, ilay lahatsarin'ny Labrys nasiana dikanteny eo ambany (rohy tapaka);
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/25/115827/
 vondrona Labrys an'ny nanova na mpitia mitovy fananahana ao Kyrgyzstan: http://kyrgyzlabrys.wordpress.com/
 13 Martsa 2008 lasa teo: https://www.globalvoicesonline.org/2008/03/13/kyrgyzstan-lgbt-and-allies-reactions-to-russian-orthodox-church-homophobic-statements/
 fihetsempon'ny filazambaovao sy ny daholobe manoloana ny fivorian'ny mpanao gazety tamin'ny 14 Febroary: http://kyrgyzlabrys.wordpress.com/2008/03/07/media-and-public-reactions-to-14-feb-press-conference/
 an'ity rohy ity mankany amin'ny tranonkalan'ny Labrys: http://kyrgyzlabrys.wordpress.com/2008/03/04/russian-orthodox-church-against-sodomites/
 Kyrgyz fandefasana lahatsary: http://www.video.kg/
 Bektour Iskender: http://kloop.kg/
 Maksim Bratukhin: http://maximbro.blogs.akipress.org/
 lahatsary Rosiana feno: http://www.video.kg/7875
 nasiana feo faharoa: http://video.google.com/videoplay?docid=-881636398480273416